(မြန်မာ) မိဘနှင့်အုပ်ထိန်းသူစစ်တမ်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှု (ဘာသာတရားဆိုင်ရာ Ed) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ Survey
(မြန်မာ) မိဘနှင့်အုပ်ထိန်းသူစစ်တမ်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှု (ဘာသာတရားဆိုင်ရာ Ed) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊
သီချင်းဆိုလျက်ဂုဏ်တော်ကိုငါချီးမွမ်းမည် (ဆာ ၂၈း၇) ။
အတ္တလန်တာ၏ Archdiocese ၏လမ်းညွှန်မှုအပြီးနှင့် Dekalb ကောင်တီရဲ့မော်ဒယ်ရှာဖွေနေ, Corpus Christi နီးပါးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်နှစ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အခြေအနေကခွင့်ပြုပါက၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမိသားစုစုရုံးမှုများအားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ စုရုံးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းစင်တာများနှင့်အတ္တလန်တာမြောက်၏ Archdiocese တို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုညွှန်ကြားချက်များကိုအချိန်တိုင်းတွင်လိုက်နာရမည်။ အပူချိန်ယူခြင်း၊ လက်ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ခြင်း၊
* 1. သငျသညျဒီကျဆုံးခြင်းယုံကြည်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၌စာရင်းသွင်းပါလိမ့်မည်ကလေး (ren) / ဆယ်ကျော်သက် (မ်ား) ၏, သူတို့အဘယျသို့အတန်း (တန်း) ရှိပါသလဲ
သူငယ်တန်း - ၅ တန်း
အလယ်တန်းကျောင်း - ၆ မှ ၈ တန်း
အထက်တန်းကျောင်း - ၉ တန်းမှ ၁၀ တန်းအထိ
* 2. သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေး (ren) / ဆယ်ကျော်သက် (မ်ား) သည်စက်ပစ္စည်း (တက်ဘလက်၊ လက်တော့သို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်း) ကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိပါသလား။
* 3. သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေး (ren) / ဆယ်ကျော်သက် (များ) တွင်စိတ်ချရသောအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
* 4. virtual လေ့လာမှုနှင့်သင်၏အကြီးမားဆုံးရုန်းကန်မှုများကားအဘယ်နည်း၊ စီရင်စုနယ်ကသင့်ကိုမည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
* 5. 100% virtual ဖြစ်သည့်အခါယုံကြည်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း / ဘာသာရေး Ed သို့လာရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိုးရိမ်မှုများကဘာတွေလဲ။
* 6. သင်၊ သင့်ကလေး၊ သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ထောင်စုဝင်တစ် ဦး ဦး သည် Covid-19 နာမကျန်းမှု / ဒဏ်ရာများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်အမျိုးအစားရှိပါသလား။ (အနည်းငယ်ဖော်ပြရန်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ immunocompromised, ဆီးချိုရောဂါ, သွေးတိုးရောဂါ, ကင်ဆာ, ... အနည်းငယ်။ ) သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်များ, ဝန်ထမ်းများနှင့်စီရင်စုနယ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ပဌနာ၌ရှိကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သိပါ!
* 7. ဒီနှစ်အတွက်အစီအစဉ်မှာဤအစီအစဉ်သည်မိသားစုကိုအခြေပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမိသားစုတစ်ခုလုံးပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့်ဂျွန်ပေါလ် ၂ ၏စကားအရ“ မိဘများသည်မိမိတို့သားသမီးများကိုပထမဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးပညာပေးသူများဖြစ်ကြသည်” မိသားစုများထံစာ၊ ၁၉၉၄၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်။ ထို့အပြင်သူက“ မကြောက်ကြနှင့်!”
ရက်သတ္တပတ် ၁ - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မိသားစု ၁၀ စုနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်း
ရက်သတ္တပတ် ၂ - ချဲ့ခြင်းမရှိပါ။ မိသားစုသည်အပတ် (၁) တွင်ပေးထားသောစီမံကိန်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
အပတ် (၃) - အပတ် (၂) အတွင်းအိမ်၌သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစီမံကိန်းကို“ ပြသရန်နှင့်ပြောပြရန်” သင့်မိသားစုအုပ်စုနှင့်အတူချဲ့ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ကလေးများစက္ကမင်မင်္ဂများအတွက်ပြင်ဆင်ထားစဉ်မိသားစုကို ပိုမို၍ ခိုင်မာစေပြီးတာဝန်ယူမှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
အပတ် ၄ - အပတ် ၄ တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာနှစ်ခုရှိသည်။ သင်၏မိသားစုသည်တစ်ခုတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်။
(က) ချဲ့ခြင်းအစည်းအဝေး - ပထမ ဦး ဆုံးမိတ်သဟာယကိုလက်ခံရရှိသူများအတွက်မိခင်ဘာသာစကားပြင်ဆင်ခြင်း (မိဘတစ် ဦး တည်းဖြင့်)၊ နှင့်အတည်ပြုခံရသူများအတွက်ချုံ့ချဲ့အစည်းအဝေး (စပွန်ဆာသို့မဟုတ်မိဘနှင့်အတူ)
(ခ) မှန်ဘီလူးတွေ့ဆုံခြင်း - ပထမဆုံးမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်သူများအတွက်သင်၏မိသားစုသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကျမ်းစာပုံပြင်သို့မဟုတ်ယေရှု၏ပုံဥပမာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုဆုံတွေ့ကြရန်တွေ့ဆုံကြလိမ့်မည်။
[ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ - Edge နှင့် LifeTeen သည် ၄ ​​င်းတို့အဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်၊ သို့သော်မိသားစုအုပ်စုများတွင်ပါ ၀ င်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ]
* 8. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ virtual သွားနေတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့မလိုပါဘူး။ သင်၏မိသားစုသည်နောက်တစ်နေ့တွင်တွေ့ဆုံမည်လား။
* 9. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့က virtual သွားနေလို့ဒီဘာသာစကားကိုပြောတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ဦး ဆောင်ပြီးဘာသာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုအုပ်စုတွေရှိဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်၏မိသားစုသည်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုတွင်ပါဝင်လိုပါသလား။
သင်က catechist တစ်ယောက်ဖြစ်လိုခြင်းအကြောင်းသိလိုလျှင်သို့မဟုတ်သူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုသိလျှင်၎င်းကိုစစ်ဆေးပြီး and လိရှဗက်ကိုရုံးခန်းမှာဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဘာသာစကား ဦး စားပေး:
* 10. သင့်လျော်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများရှိပါက - အပူချိန်ယူခြင်း၊ လက်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးများတပ်ခြင်း၊ လူမှုအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း - သင့်မိသားစုသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်လိုသည်ဟုထင်ပါသလား။
ယေရှုက“ သင်တို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ငါသည်လောကကိုအောင်ပြီ” ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းသခင်ယေရှုပေးသည်ကိုသတိရပါ (ယော ၁၆း၃၃) ။